Fu Dao Le | Oghere Fruity £ 5 + £ 500 FREE! Fu Dao Le | Oghere Fruity £ 5 + £ 500 FREE!
Fu Dao Le bụ ihe Oriental themed oghere egwuregwu na yi Chinese ọcha gbaa anya n'ebe nile. Na oge ochie a style welcome bonus mobile cha cha oghere egwuregwu, ị nwere ike igwu na 5×3 esi anwụde format. I nwere ike imeri ebe a si 243 dị iche iche na-emeri ụzọ na-enyere gị aka ka mma uru ole na ole spins. The-esi anwụde na-enịm n'elu a ọgaranya red ọgaranya red kapet imewe na Feng Shui arụsị gburugburu. E nwere a obi music na-arụ na ndabere na-enyere gị zuru ike mgbe ị na-mesiri. Ịkụ nzọ nke egwuregwu a na-amalite na £ 0,38 na kacha ị nwere ike ịga ruo bụ £ 88 a uzo. Nke a nchawa bụ playable on mobile igwe na mbadamba oke.
Banyere Mmepụta nke Fu Dao Le
Scientific, otutu cha cha egwuregwu soplaya na ihe n'ụba nkà na ahụmahụ bụ Mmepụta nke a welcome bonus mobile cha cha game. Ha kere ọtụtụ narị egwuregwu si dị iche iche cha cha ige ndị dị otú ahụ dị ka video ohere mpere, table egwuregwu, jackpots, ozugbo Enwee Mmeri na Bingo.
The nnọchianya nke a welcome bonus mobile cha cha game mejupụtara a ọlaedo ingot, Feng Shui koi azu kaapu, Chinese lanterns na oroma mkpụrụ osisi. The akara na kasị elu uru nke payout bụ ọlaedo ingot. Nke a bụ mgbe ị na-ala ise ingots gafee ifịk paylines. The ala mmeri nnọchianya nke a oghere na-kaadị ụkpụrụ si 9 na Ace. E nwere otutu ego atụmatụ na egwuregwu a na-enyere gị aka imeri ụfọdụ elu-uru nwa anụmanụ. The akara na-akpalite ha bụ a banner, a dragon ekpuchikwa, ọlaedo ifuru na a green ọta.
Wild daashi: The Chinese banner bụ anụ nnọchianya nke a welcome bonus mobile cha cha game. Ọ na-ekpuchi niile isi na akara ma anaghị ekpuchi ndị ọzọ na bonuses. E nwere atọ ụdị nke anụ ọhịa; 2x ọhịa, 3x ọhịa na stacked ọhịa na ọdịdị nke ha bụ random.
Symbol Mgbanwe: The ọlaedo ifuru akara na ogosiri stacked nwere ike ịgbanwe n'ime ihe ọ bụla elu-uru na akara ma ọ bụ wilds. Nke a ga-enyere gị ka ibu Enwee Mmeri.
Free spins: The green ọta ka artefact bụ ihe nnọchianya na-enyere gị na-akpalite free spins. Atọ nke ọdịdị ya na-esi anwụde abụọ anọ nwere ike inye gị asatọ spins.
jackpots: The red dragon envelopu bụ ihe nnọchianya ndị na-akpali jackpot. Ị ga-ala a akara ke esi anwụde onye na ise. I nwere ike imeri Obere, obere, isi na Maxi jackpots mgbe na-eme.
Summary: Na otutu bonus na akara na-aga n'ihu jackpots ohere, a welcome bonus mobile cha cha egwuregwu bụ maa kwesịrị agbalị.